Semalt 전문가 : 당신이 피해야하는 SEO 과오는 무엇
SEO uye kushambadzira kwemagariro ezvemagariro zvinhu zviviri zvisingagoni kuparadzaniswa kana zvichisvikakumakambani ekutengeserana. Zvose Zvemagariro ezvekutengeserana nekushambadzira uye SEO basa ndezvekugadzira, maitiro akawandisa. Vose, vanoisa pfungwa pakuvaka achinonyanya kukosha chimiro chinowanzokwezva chitima chepamusoro. Zvemagariro evanhu anoshandisa huwandu hwehutano hwakanyanya hunoonekwa kuvanhu chaiyeuyo anoiverenga. Semugumisiro, Zvemagariro ezvehupfumi zvinopa nzvimbo yakagadzikana yekuratidzira kuvapo kwechiso pamwe nekuwedzera nzira dzako dze SEOyakashandiswa kuvateereri vakarurama - sava eskimo s3 hp test.
Kune ipi neipi iri muIndaneti mutengesi, zvinonzwisisika kuti huwandu hwemagariro evanhu hunovandudzawebsite ye search engine ranking. Zvisinei, vazhinji veSOO neVashambadziri vezvemagariro evanhu vanokundikana kutsanangura kuti huwandu hwehuwandu hwehupfumi hunobata sei SEO kushanda.Max Bell, Mutungamiri Wekubudirira Kwevatereji Semalt Digital Services Inotsanangura kuti SEO inobatsira sei huwandu hwemagariro ehupfumi hunoisa kune masayiti edzimba.
Kukura Nhamba Yevateveri Vako
Mapeji ezvehuwandu hwemagariro evanhu apo nhamba yakawanda yevateveri inotarisa zviri nanisocial media websites kune avo vane vashoma vateveri. Somuenzaniso, vanhu vanogona kuwirirana nehuwandu hwehupenyu pavanenge vachida post,kubvumira unyanzvi, retweeting kana kuisa zviongorudzo paGoogle +. Imwe kambani ine vateveri zana vangave isingagamuchiri zvakafananabhonasi sekambani ine vateveri vane mamiriyoni mumitsara yakafanana. Kuwedzera vatevedzeri vako vanogona kuva chinhu chinokosha kuti uite kuresezvikwata zvinoshandiswa..Zvisinei, ine muganhu. Semuenzaniso, Google haigoni kupa bhonasi yeproxy ye peji nevateveri vomuproxy 1000.Somugumisiro, zvakakosha kutsvaga nhengo dzakanaka dzevanhu, iyo inobatanidza uye inokurudzira vanhu kubatana neboka renyu kanatora chikwata.
Kushandisa zvakanyanya kutsvaga mazwi muwebsite yako
Kungofanana nemamwe mawebhusayithi, keywords vanoita basa rakafanana mumagariro evanhu.Kune peji yevamwe vevanhu inoguma kune yakakwirira, mapepa akawanda ane mapuranga anofanira kuwanikwa uyewo zvinyorwa zvakanyorwa uchishandisa zvakakodzerakeywords. Chero chero chinyorwa chakafanana nepa Facebook chinofanira kuenda nemashoko akawanda anotsvaga anobatsira kutungamirira vateereri vako pawebsite yako. Socialmedia backlinks inhu hunoenderana. Aya mazano anobatsira kutsvaga injini kusimbisa mapeji ezvo nehuwandu hwevashanyi vanobva mune zvevhidhiyo kusvika kuneavo vane zvishoma.
Kuvandudza Zvinyorwa Zvako Zvitsva
Zvakakosha kuita zvigadzirwa zvewebsite zvakatsvaga uye zvingagoverwa. Forchiitiko, nzvimbo dzakadai saPinterest dzinoita kuti web content inakidzwe kumapoka nekuda kwehutano hwehupfumi hwehupfumi. Mune dzimwe nguva, vazhinjisocial media media ine sarudzo yega yega inoita kuti nzvimbo ionekwe kune vamwe vakasarudzwa sevateveri. Somuenzaniso, YouTubeVhidhiyo inogona kunyorwa chete kune vanhu vane chikwata chacho. Mukushambadzira kwe-Facebook, kubatana kunogona kuitwa kuoneka kune avo chete, avo vakabvumira kuonanguva. Nenzira iyi, kana ukanyatsoongorora tsvakurudzo dzako mumagariro evanhu, webhusaiti yacho inogona kuve yakakwirira.
Social Media iripo ine zvakakosha pajini yekutsvagamhando yeimwe nzvimbo yepaIndaneti. Nzira dzakawanda dzekutengesa kwehutachiona hunoda kushandiswa kwehutano hwehutano hwemagariro evanhu kuitira kutikusvika pakubudirira. Nzvimbo inoshingaira yehuwandu hwehupfumi ndiyo chiratidzo chikuru chevaverengi chaivo munharaunda yako inogona kukurumidza kuva vashanyikuburikidza nekuisa chibatanisi kune maakaunti akasiyana-siyana uye mapeji evhu. Somugumisiro, bhizimusi chero ripi zvaro rinoshandisa internet rinogona kubatsiro kubva kumashure kumashureuye motokari inobva kumasangano ezvehuwandu hwemasangano uyewo kubatsirwa nemigumisiro yehuwandu hwemagetsi.